Udokotela wezibalo neziyalo ezishubile entsheni - Ilanga News
Home Izindaba Udokotela wezibalo neziyalo ezishubile entsheni
Udokotela wezibalo neziyalo ezishubile entsheni
Mayisebenzise zonke izinhlaka
KUQUBULE isasasa elikhulu ezinkundleni zokuxhumana ukudlubha ijazi elibomvu lobudokotela kukaDkt Hloniphile Sithole-Mthethwa, okhethe ukuzibungazela usuku lokwethweswa kwakhe iziqu nomndeni wakhe kanti uzogcina esehalaliselwa
yiNingizimu Afrika yonkana ngokuhlabana kwakhe ngalezi ziqu.
UGQUGQUZELA intsha ukukhuthalela ukusebenzisa zonke izinhlaka ezikhona zezemfundo ukuqhubeka nokuzithuthukisa ezeseka ngokuthi umhlaba ngeke usefana nasekuqaleni emuva kokuqubuka kweCovid-19. Lokhu kushiwo ngowesifazane ompisholo osanda kuzuza iziqu zeDoctor of Philosophy in Applied Mathematics e-University of KwaZulu-Natal (UKZN).
UDkt Hloniphile Sithole-Mthethwa waseSigodini, eMgungundlovu, uthi kubaluleke ngendlela engachazeki ukuba intsha ishintshe indlela ephila ngayo, kwazise nomhlaba uyaqhubeka nokuguquka ngenxa yalo mkhuhlane.
Ukhethe ukulubungaza nomndeni wakhe usuku obekumele athweswe ngalo iziqu zobudokotela.
Uthi nakuba izwe livaliwe kodwa ugqugquzelwe ngu-Dkt Daphney Mathebula ofundisa e-University of Venda, abukela kuyena, ukuba angazilibazisi, kepha makayigqoke imvunulo yakhe yonke aconse, uma esebungaza lolu suku olubalulekile kuyena nomndeni.
Uthole lezi ziqu e-UKZN nje, uDkt Sithole-Mthethwa uphinde afundise kusona lesi sikhungo.
Le ntokazi izalwa nguMnu Bonginkosi noNkk Thembi Sitho-le kanti bathathu kubo. Ugqugquzelwe kakhulu nguNkz Nonhlanhla “Granny” Sithole ukuqhubeka nezifundo zakhe njengoba ethi ezokuqala wazenza ehlala naye.
Ukhule ezichithekela ezibalweni
“Amabanga aphansi ngiwafunde eNichols Primary, ngadlulela e-Edendale Higher Primary kwathi umatikuletsheni ngawenza e-Edendale Technical High School,” esho.
Uthi ubevele ezifela ngeziqu zeSayensi. Uthathwe yi-UKZN wenza iziqu zokuqala ze-Bachelor of Science in Applied Mathematics and Statistics. Ube esenza ezeBsc Honours, eStellenbosch University, wabuyela e-UKZN esezokwenza iziqu zeMaster of Science.
“Njengoba bekumele ngigqoke iziqu nje ngomhla ka-14 kule nyanga, bengizobe sengigqoka okwesine kodwa nakho lokhu (kugqoka) bekubaluleke kakhulu kimina ngoba kayibanga lula indlela yokufika ekubeni ngudokotela ngokwezemfundo,” esho.
Uthi kusukela emabangeni aphansi ubezichithekela nje ezibalweni kanti ubalula othisha ababili, uNkk Thandeka Nene osengusomabhizinisi owaziwayo eThekwini noDkt Pinkie Mthembu, athi yibona abamfake uthando lwezibalo.
Uthi ngesikhathi eyokwenza unyaka wokuqala e-UKZN, ubevele esenalo uthando lokufundisa izibalo esikhungweni semfundo ephakeme ngolunye usuku.
Uyiseuthwale kanzima engakawutholi umfundaze
“Ukufunda eStellenbosch kunge-nze ngathanda ezokucwaninga nokusebenza kulo mkhakha engikuwona njengamanje. Ngiyazi izibalo zithathwa ngabantu abaningi njengesifundo esinzima kodwa kangikaze ngibe naleyo nkinga,” kusho uDkt Sithole-Mthethwa.
Uthi kubantu abasha abasesabayo lesi sifundo, kumele bazejwayeze ukungasesabi. Uthi uma ususejwayele kasinzima kakhulu futhi uma usithanda naso siyakuthanda.
Uthi usizwe kakhulu nawukwesekwa ngabazali bakhe abakholelwayo emfundweni. Nokho uthi uyise uthwale kanzima ngesikhathi esenza unyaka wokuqala enyuvesi ngoba akakwazanga ukuthola uxhaso.
“Ngibe nenhlanhla yokuthola umfundaze sengenza unyaka we-sibili. Kusukela lapho kangiphindanga ngakhokhela izifundo zami, kuze kube yinamhlanje ngisalokhu ngifunda ngemifundaze nje kuphela,” esho.
Uthi isifiso sakhe esikhulu wukwelekelela abafundi abaqhuba izifundo zabo ngokubasiza nxa benza ucwaningo nokunye okuningi. Ushade noMnu Buzani Mthethwa kanti banezingane ezimbili, uKhwezi noBukhosi.
Ubonga ukwesekwa wumyeni obesala nezingane
“Izifundo zami zeziqu zobudokotela kazibanga lula njengoba bekumele ngenze isikhathi sempilo yasekhaya, wumsebenzi nesezincwadi zami. Ngesinye isikhathi bekudingeka ngihambele izinkomfa, ngishiye izingane nomyeni wami.
“Okuhle wukuthi umyeni wami uyangeseka kanjalo nomndeni wasemzini nowakithi. Ngibonga kakhulu kuSolwazi Precious Sibanda noSolwazi Sandile Motsa ngokungelekelela ngocwaningo lwami nokungigqugquzela ukuba ngiqhubeke. Ngesikhathi ngenza lezi ziqu ngikwaze ukushicilela amaphepha amane ocwaningo,” esho.
Uthi ukhethe ukubungaza usuku lokugqoka nomndeni wakhe ngoba bekubaluleke kakhulu kuyena ukudlubha imijiva ebomvu, kwazise inhloso yakhe enkulu wukugqugquzela abantu abasha bakuleli ikakhulukazi abafundi bakhe.
“Bekuzoba mnandi kakhulu ukugqoka ngosuku olulodwa na-bafundi ababili ebengibalekelela ezifundweni nasocwaningweni lwabo, uNkz Nolwazi Nkomo owenza iMaster of Science noNkk Tsepiso Madondo obenza iHonours in Applied Mathematics kanjalo nomngani wami omkhulu engibukela kuyena uDkt Daphney Mathebula ofundisa e-University of Venda ongigqugquzele ukuba ngilubungaze lolu suku.
“Bengingazi-ke ukuthi ngizogcina sengibungaza neNingizimu Afrika yonke, okuyinto ebengingayilindele,” esephetha.
Previous articleIyinkinga eye-rent kwabaqashile
Next articleUhulumeni wase-kzn neqhinga lokulwa ne-corona